Dhul gariirkii Marmara | RayHaber | raillynews
Duqa Magaalada Istanbul Ekrem İmamoğlu'nun Seminaarka Dhulgariirku wuxuu ku bilaabay khudbadda furitaanka, dhammaan dhinacyada qatarta dhulgariirka Istanbul waa miiska. Iska caabbinta Dhulgariirka ee dhismayaasha iyo tababbarka masiibada, fikirka guud ee khubarada maxalliga ah iyo kuwa shisheeye [More ...]
Digniinta Musiibada ee Channel Istanbul! Dhulgariir La Filayay Inuu Dhacdo 9-10 Severity; Xubin ka ah Akaademiga Sayniska Dr. Naci Görür ayaa soo saartay bayaanno la yaab leh oo ku saabsan mashruuca Kanal Istanbul. Adkeynta khatarta uu mashruucu ka abuuri doono Istanbul [More ...]
Turhan, 15 Luul Martyrs iyo Fatih Sultan Mehmet buundooyinka ayaa tilmaamay in seismiyan ahaan la xoojiyay, ayaa yiri: "Mar labaad 2 kun 475 hal mar sanadkii si ay u dhacdo ka hortagga dhulgariirka u adkaysata [More ...]
Laanta Izmir ee IMO 'Izmir Diyaar uma ahan Dhulgariirka' Digniinta
Rugta Injineeriyada Rayidka (IMO) Izmir Laanta, 17 Agoosto 1999 Dhulgariirkii Marmara sababtoo ah sanadguuradii 20 ee ku dhawaaqistii la sameeyay. Qoraalka qoraalka ah ee ay soo saartay IMO Izmir Laantiisa waa sidan soo socota; Od Rugta Injineerada madaniga ah [More ...]
Mashruuca Mashruucyada Mashruuca ee Mashruuca Mashruuca Mashruuca Mashruucyada Mashruuca
Maalmahan, waaxaha dowliga ah iyo kuwa gaar ahaaneedba, Mashaariicdii loo diyaariyay dhulgariirkii ka dhacay Istaanbuul Sabtidii Dhulgariirkii ayaa si aad ah loogu hadlaa. Sida khubaradu sheegeen, Marmaray ayaa la hirgaliyay sannadihii ugu dambeeyay, [More ...]
Transport, arrimaha badda iyo Wasiirka Isgaarsiinta Ahmet Arslan, oo ku yaalla aagga dhulgariirkii ka dhacay dalka Turkiga sida Yavuz Sultan Selim Yildirim iyo tunnel Marmaray iyo farqiga dhismeedka Rafaa Eurasian 2 500 kun oo sano ah [More ...]
Professor Dr. Ilıcalı wuxuu qiimeeyay joogteynta mashruucyada ka dhanka ah dhulgariir suuragal ah: AK Party Erzurum kuxigeenka Professor. Dr. Mustafa Ilıcalı wuxuu martida u ahaa barnaamijka 'Toddobaadka ee Hakan Çelik' oo laga sii daayay shaashada CNN Türk. [More ...]
Rugta injineerinka cilmiga dhulka: Warbixinta maxkamada hantidhawrka ayaa cadeysay walaacyadayada. Qolka, tareenka xawaaraha sare ku socda iyo 3. Mashaariicda garoonka diyaaradaha [More ...]
Marmaray waxay dhaaftay tijaabada dhulgariirka: Dhulgariirku wax saameyn ah kuma yeelan Marmaray Dhulgariirkii 4,7 ee Marmara Ereğlisi wax saameyn ah kuma yeelan mashruuca Marmaray ee qarnigii. Faallooyinka ka dib, khubaradu waxay sameeyeen baaritaan ku saabsan marinnada tuubbooyinka. Wax saameyn ah oo xun lama arag inta lagu gudajiray koontaroolada. Asrin [More ...]
Sidee Marmaray u saameyn doontaa Dhulgariir Marmara
Sidee Marmaray u saameyn doontaa Dhulgariirkii Marmara: Aqoonyahan Mareykan ah, Marmaray iyo Kanal ayaa ku dhawaaqay saameynta dhulgariirkii ka dhacay Magaalada Istanbul.Guddoomiye ku-xigeenka Seeraha u qaabilsan Mareykanka Leonardo Seber ee Jaamacadda Columbon ee Lamont-Doherty World Observatory; Cilad Çınarcık ee Badda Marmara [More ...]
5 ma ahan Besiktas daqiiqado daqiiqo 4 Europe-Asia daqiiqado
5 daqiiqad Besiktas maaha 4 daqiiqad Yurub-Aasiya: Uskudar-Sirkeci Marmaray'la 4 daqiiqado hadda laga bilaabo. Markii hore, '5 daqiiqadood Besiktas' waxaan dhihi jirnay. Waxaan hadda dhihi doonnaa '' 4 Europe / Asia daqiiqaddii '. Wasiirka Gaadiidka Binali Axadda [More ...]
Aragtida dunida ayaa ku jirta TÜVASAŞ
Turkey baabuur Industry Inc. (TÜVASAŞ), inkastoo la duminayo boqolkiiba 85 dhulgariirkii xumeeyayna la soo badbaadiyay xiritaanka mahad dadaalka shaqaalaha ah, dhoola wejigiisa baabuurta dhoofinta in oofin maanta. Shirkadda ugu weyn ee warshadaha Story Turkey ee 500 [More ...]
Waxaa la burburiyey dhulgariirkii, maanta waxay u dhoofinaysaa wagon si adduunka
Guddiga ayaa ku Sakarya, Turkey baabuur Industry Inc. (TÜVASAŞ), inkastoo la duminayo boqolkiiba 85 dhulgariirkii xumeeyayna la soo badbaadiyay mahad xiritaanka furitaanka shaqaalaha, wejiyadooduna waxay u ilka baabuur dhoofinta in oofin maanta. 500 ugu weyn ee Turkiga [More ...]